Iinkonzo zomatshini zeCNC, iiNxalenye zoMatshini zeCNC, izahlulo zeCNC zensimbi - iBXD
Iinkonzo machining CNC (3-, 4- & 5-Axis) iindawo nocoselelo eliphezulu imveliso ephantsi-umthamo.
Uluhlu lwethu lweenkonzo zokugaya ze-CNC zingabonelela ngokuchanekileyo kwiprojekthi yakho.
Uluhlu lwethu olubanzi lwe-lathes ze-CNC kunye namaziko ajikayo aya kukuvumela ukuba uvelise iindawo ezijike ngakumbi.
Iinkonzo kubandakanya ukusika i-laser, ukubetha ngenqindi, ukugoba, ukucofa i-rivet kunye ne-welding, njl.
Ibhokisi yebhokisi yamandla esinyithi esenziwe ngeGolide ...
Aluminium ingxubevange 6061 CNC Metal Izahlulo Kuba Camera ...
Aluminium ingxubevange 6061 CNC Ivula Izahlulo For Lithi ...
CNC Machining Izahlulo Galvanometer Box for UV ...
Isebenza njani iBXD
Ngenisa imizobo yakho
I-BXD ukusukela ngo-2010, iinjineli zethu bezibonelela ngeenkonzo ze-machining ze-CNC ngaphezulu kweminyaka eyi-10 kwaye bakhe amava atyebileyo avela kwiiprojekthi ezininzi zangaphambili, sinako ukuphatha iindawo ezinobunzima kunye nokuchaneka ngaphandle kwengxaki.
Ingxelo ekhawulezileyo, ukuhanjiswa ngexesha
Ngokomndilili sibuyisa iikowuti ngaphakathi kweeyure ezingama-24, iinxalenye zenqanawa ngaphakathi kweentsuku ezisi-7 okanye ngaphantsi, kwaye sine-99% yokuhanjiswa kwexesha kunye nenqanaba lomgangatho.
Gcwalisa izixhobo, isisombululo esisodwa
I-BXD inezixhobo ezipheleleyo zokuvelisa kunye nokuvavanya. Siza kubonelela ngeenkonzo zokumisa zokumisa zivela kwizinto ezingavunyelwanga ukugqiba iimveliso.
ISO9001: 2005 eqinisekisiweyo
Umzi mveliso wethu ngu-ISO9001: 2005 umenzi oqinisekisiweyo wemveliso ekumgangatho ophezulu
Silandela iinkqubo ezingqongqo zamalungu akho zihlala zihlangabezana nemigangatho ephezulu yomgangatho.
Siqinisekisa ukukhuselwa kwe-IP yakho
iindawo zesiko ngoku
Nceda ushiye kuthi kwaye siya kuba kwebala ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Zonke izinto ezifakiweyo zikhuselekile kwaye ziyimfihlo
5 Axis Machining iindawo ezintsonkothileyo
Yintoni CNC 5 Axis machining kwaye ziziphi iingenelo? Kwiminyaka yakutshanje, axis ezintlanu-CNC machining ziye ngakumbi nangakumbi ezisetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo. Kwizicelo ezisebenzayo, xa abantu behlangabezana nokusebenza ngokukuko kunye nokusebenza komgangatho ophezulu wokumiliswa okukhethekileyo ...
Umgangatho sisiqinisekiso esomeleleyo sophuhliso lwenkampani, ngokucacileyo, ukwenziwa kwemveliso sisitshixo kumgangatho wemveliso, ukuhlolwa sisiqinisekiso semveliso. I-BXD ilandelwe ngokungqongqo kwi-SOP kwinkqubo yemveliso. Iimveliso zethu ezizinzileyo nezifanelekileyo ...
Fumana umenzi machining CNC e China
Fumana umenzi wemishini ye-CNC e-China BXD yiminyaka eli-11 yobuchwephesha be-CNC kumzi-mveliso waseShenzhen China, sinikezela ngeenkonzo eTshayina phantse iminyaka eli-11 kwaye sinabathengi baseMelika, eSingapore, eMalaysia, e-UK njl. amashishini. Sinethemba...